Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Hadii Uu Aguero Siin Doono Waqti Uu Ku Ciyaaro.
Home Horyaalka Ingiriiska Pep guardiola oo ka hadlay hadii uu Aguero Siin doono Waqti uu...
Weeraryahanka kooxda man city iyo xulka argentin sergii aguero oo ah halyeey manchester city ayaanan heysan kalsoonida maamulaha spian pep guardiola tan iyo markii uu soo gaaray dhaawac iyo wiliba cudurka halista ah ee Covid-19, tababarahiisuna wuxuu sheegay inuusan boos ka heli doonin kooxdiisa.
Pep Guardiola ayaa ku adkeystay in weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero ay tahay inuu booskiisa ka helo ka hor biloowga xagaga cusub maadama xilli ciyaaredkan uu dhamaad yahay.
In kasta oo uu halyeey u ahaa kooxda uu soo shaqeeyay tan iyo 2011, tababarihii hore ee Barcelona iyo Bayern Munich kuma casuumi doono Aguero kooxda si ku saleysan sharaftii hore.
Xaqiiqdii, iyada oo guul ay haatan gaareyso 20 kulan oo la yaab leh, Guardiola ayaa awoodi kara inuu noqdo mid qurux badan hadii uu siiyo jaanis inta ka dhiman xagaaga.
Markii la weydiiyay hadii Aguero uu u baahan doono inuu ku soo laabto sida ugu fiican ee uu ugu ciyaaro City, Guardiola ayaa ku jawaabay: “Waa uu ogyahay. Wuu ogyahay laga bilaabo maalinta koowaad, ragga ciyaara waxay mudan yihiin inay ciyaaraan.
Laga bilaabo maalin maalmaha ka mid ah dhambaalkeyga oo dhan waa: ‘Waxa aan sameynay laba saacadood ka hor waa dhammaaday.’
Kaliya maahan Sergio – waa qof walba. Waxaan isku dayaa inaan gaaro go’aanno caddaalad ah. Carwada hal ciyaartoy waa cadaalad darro mid kale.
Maanta waxa ay aheyd ciyaar adag oo dhab ah seddexda ciyaaryahan ee safka hore kaga jira. Waa war wanaagsan inuu ciyaaray 60 daqiiqo ka dibna ciyaarta xigta ee aan u baahanahay isaga, aan tagno.
Sergio aad ayuu muhiim noogu yahay. Wuxuu dhaliyay goolka ugu muhiimsan taariikhda kooxdan.
Waxaan rabnaa inaan caawinno isaga – wuu sameyn doonaa.”
Muddo intee le’eg ayuu Aguero maqnaa?
Kulankii Aguero ee ay la ciyaareen West Ham sabtidii ayaa ahaa kooxdii ugu horeysay ee uu u tartamo tan iyo markii ay 3-1 kaga badiyeen Chelsea 3dii Janaayo.
Wuxuu seegay 14 kulan oo uu ciyaaray ka dib markii uu qandaraas la galay Covid-19.
Waxa uu qabtay olole bilow ah kaasoo ku xaddiday kaliya 11 kulan oo uu u saftay xilli ciyaareedkiisii fiicnaa ee kooxda.
Sidoo kale jirro, wuxuu soo maray labo dhaawac oo jilibka ah iyo mid kale oo qaba dhibaato muruqa ah.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Real Madrid Vs Real Sociedad ee Horyaalka Spain
Next articleMilkiilaha iska leh Inter Miami CF oo sheegay inuu kooxdiisa keeni doono Messi iyo Ronaldo.